ဟောလိဝုဒ် (Hollywood) သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ မြို့လယ်ခေါင်မှ အနောက်မြောက်အရပ်တွင် တည်ရှိသည့် အနီးဝန်ကျင်ရှိ လူနေရပ်ကွက် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုများနှင့် နာမည်ကျော် မင်းသား၊ မင်းသမီး အများစု နေထိုင်ရာ...
သရဲ တစ္ဆေဆိုတာမျိုးက မည်သည့်လူမျိုးဘာသာမှာ မဆိုရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သရဲတစ္ဆေ ယုံကြည်သူများစွာရှိသလို မယုံကြည်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ သိပ္ပံပညာအရ သရဲတစ္ဆေတွေကို သက်သေပြဖို့ရာမလွယ်ကူပေမယ့် တကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့သူများရဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်း ၊ ကျမ်း တွေကတော့ အမြောက်အများရှိတဲ့အတွက် အများစု ယုံကြည်နေကြတာလည်း မဆန်းပါဘူး။...
ရန်ကုန်၏ မူလအမည်မှာ ဒဂုံ ဖြစ်သည်။ ရန်တွေကုန်စင်သော အဓိပ္ပါယ်နှင့် အလောင်းမင်းတရားကြီးက ရန်ကုန်ဟု အမည်ပြောင်းလိုက်သည်။ မူလအမည်က ဒဂုံသည် မွန် ဝေါဟာရ ဒဂုင်၊ လွုင် တို့က ဆင်းသက်ပြီး ဒဂုံဖြစ်လာသည်။ ထိုနာမည်သည် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကို...
ဒီနေရာ ဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေနဲ့ မစိမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အများစုမကြာခဏ မြင်ဖူးလေ့ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ တရုတ်ဇာတ်လမ်း အများစုဟာ ဒီနေရာမှာ ရိုက်ကူးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ တားမြစ်ထားသောမြို့တော် ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့လယ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ တရုတ် Ming မင်းဆက်က...
စပိန်အလယ်ခေတ်သမိုင်းမှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူ့နာမည်အရင်းက Rodrigo Díaz de Vivar ဖြစ်ပေမယ့် အားလုံးက သူ့ကို EL Cid လို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်။ စစ်ပွဲများရဲ့ အရှင်သခင်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ သူဟာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် စစ်ပွဲတိုင်းမှာ...
ခေါင်ဇာနည်ဝင်၊ ပြောင်မာတင် သည့်၊ မြရှင်သကျ သမ္ဗဒ္ဓု၏ ပုတ္ထ ရင်းစစ်၊ ဖြစ်ကြီးဖြစ်၍၊ မဟစ္ဆရိ၊ အံ့လောက်ဘိသား၊ တြိသာသနာ၊ စက်ရောင်ဝါနှင့်၊ မြန်မာမျိုးညွန့်၊ ညှိုးမတွန့်အောင်၊ သက်စွန့်လျက် ပင်၊ ရွှေလမ်းထွင်သား၊ အရှင်ဥတ္တမ၊ ထေရိန္ဒလျှင်၊ ဝံသပါလိတ်၊...
အိမ်ဖြူတော်ဆိုတာနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရနေရာတစ်ခုဆိုတာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ အိမ်ဖြူတော်ရဲ့အကြောင်းကို ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ မဖတ်ရသေးသူများ ဒီမှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အခုတစ်ခါတော့ အိမ်ဖြူတော်ထဲမှာ ရှိတဲ့နေရာတွေအကြောင်းကို သုတဇုန်မိတ်ဆွေများအတွက် ဗဟုသုတအနေနဲ့ မျှဝေသွားပါမယ်။ အိမ်ဖြူတော်ရဲ့အကျယ်ဟာ ၅၅၀၀၀ စတုရန်းပေခန့် ရှိပြီး ဒီအထဲမှာ...
(Unicode) စစ်သူကြီး အဂ္ဂ မဟာ သေနာပတိ သတိုးသုဓမ္မ မဟာ ဗန္ဓုလ (၆ နိုဝင်ဘာ ၁၇၈၂-၁ ဧပြီ ၁၈၂၅)သည် ဘိုးတော်ဘုရား နှင့် ဘကြီးတော် မင်းတို့လက်ထက်တွင် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ သက်စွန့်ကြိုးပမ်း အမှုတော်ထမ်းခဲ့သော...
Written By ကေမြူး ၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ နံနက် (၀၅း၀၅) နာရီတွင် ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး တွင် သူ ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။ သူ ကွယ်လွန်သည့် သတင်းက...
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံးနိုင်ငံဟာ ရုရှားဆိုတာ အများစု သိကြပါလိမ့်မယ်။ ကနေဒါ ၊ တရုတ် စတာတွေကို အကြီးဆုံးလို့ထင်တဲ့ သူတချို့လည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံကနေ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀ နိုင်ငံကျော် ခွဲထွက်သွားတာကြောင့် ရုရှားက အကြီးဆုံးမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့...
Page 210 of 233 Prev 1 … 209 210 211 … 233 Next